Cialis: ဘယ်လိုယူပါရန်နှင့်မည်သို့ Long ကကကြာရှည်ခံ | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/Cialis , tadalafil/Cialis: ဘယ်လိုယူပါရန်နှင့်မည်သို့ Long ကကကြာ
အပေါ် Posted 10 / 13 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Cialis, tadalafil.
မည်သို့လျင်မြန်စွာ Cialis အမှုန့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ Long ကဒါဟာကြာရှည်ခံ
ပုံမှန်အား 30 မိနစ်အတွင်းထိရောက်မှု၏စတင်ခြင်းနှင့်အတူပိုမိုလျင်မြန်စွာအခြား ED မူးယစ်ဆေးဝါးများထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူလေ့ရှိတယ်။ အဆိုပါထောက်ခံချက်နှင့်အတူနေစဉ်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှ Cialis အမှုန့် 30 မိနစ်ယူသည်နှင့် Levitraအသုံးပြုသူများ 60 မိနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီမူးယစ်ဆေးဝါးယူညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Cialis ၏သက်ရောက်မှုနောက်ဆုံး 24 ကယူပြီးနောက်နာရီ 36 ရန်။ သက်ရောက်မှုဒါကြာရှည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတကယ်တော့ကိုယ်နှိုက် branded ရာ Cialis များအတွက်အဓိကအရောင်းရဆုံးအချက်ဖြစ်ခဲ့သည် "ဟုတနင်္ဂနွေဆေးလုံး။ " သူတို့သောကြာနေ့ညဥ့် Cialis ကို ယူ. , နေဆဲနင်္ဂနွေနေ့နံနက်က၎င်း၏ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မနဲ့တူအတော်များများယောက်ျား။ Cialis ရဲ့သက်ရောက်မှုများ၏တိုးချဲ့ကြာချိန်ကိုပိုမိုအလိုအလျောက်ကြောင့်ယူသည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒီထက် guesswork ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကုသမှု Cialis နှင့်အတူရရှိနိုင်သောချဉ်းကပ်
၎င်း၏ပြိုင်ဘက်မတူဘဲ, Cialis နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးအဖြစ်လိုအပ်နေသောအခြေခံပေါ်မှာယူစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးကိုနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတစ်အောက်ပိုင်းသောက်သုံးသောအတွက်ယူနိုင်ပါသည်။ 10 မီလီဂရမ် Non-စံပြဖြစ်ဖို့ထွက်လှည့်လျှင် 20 မီလီဂရမ်နှင့်5မီလီဂရမ်ပမာဏအတွက်ရရှိနိုင်သော်လည်းတစ်ဦးအဖြစ်လိုအပ်နေသောအခြေခံပေါ်မှာခေါ်ဆောင်သွားသည်ပုံမှန်သောက်သုံးသော, 10 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် regimen အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါ, အကြံပြုထိုး 2.5 mg ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် Cialis ကုထုံးကုသမှု၏သင်တန်းကျော် erectile လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် regimen နှင့်အတူ, Cialis ကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်နေ့ရက်တိုင်းမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းယူရပါမည်။ 2.5 မီလီဂရမ်နေ့စဉ်သောက်သုံးသောအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်မပါဘူးဆိုရင်, ဆရာဝန်တွေ5မှတိုးမြှင့်ခံရပါကအကြံပြုစေခြင်းငှါနေ့စဉ် MG ။
အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Tadalafil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိသနည်း
သင်အွန်လိုင်းအများအပြားအရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ပါသည် အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်။ စျေးကွက်မှာအတုထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်း Tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်သည့်အခါဒါသငျသညျတခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် realiable အရင်းအမြစ်.
Tags: Cialis အမှုန့်ကိုဝယ်, tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်, cialis အမှုန့်, tadalafil အမှုန့်
3282 Views စာ
ကုန်ကြမ်း tadalafil အမှုန့်အဘို့5နယူးနှစ်များ '' လက်ဆောင်များ
Cialis 20mg အလုပ်လုပ်ဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါသလဲ?	Stanozolol- ထိပ်တန်းကာယဗလများအတွက် steroids ရောင်း !!!